Incwadi yokufunda yekholeji yokuqala yonyaka wokuqala kunye ne-Keynesian bent ingaba ngumbuzo kwisidingo esipheleleyo kunye nokubonelela ngokubanzi njengokuba:
Sebenzisa imfuno yesigxina kunye nomzobo wokubonelela ngokubanzi ukubonisa nokucacisa ukuba nganye yezi zilandelayo ziyakuthinta njani izinga lexabiso lomlinganiso kunye ne-GDP yangempela:
Abathengi balindele ukunyuka kwemali
Imali engenayo engenayo yangaphandle
Amanani amanani angaphandle awa
Inkcitho kaRhulumente iyakhula
Abasebenzi balindele ukunyuka kwamaxabiso okuza kusasa kwaye baxoxisana nomvuzo ophezulu ngoku
Uphuculo lwezobuchwepheshe landisa umkhiqizo
Siza kuphendula nganye yale mibuzo ihamba ngenyathelo. Okokuqala, nangona kunjalo, kufuneka simise ukuba yeyiphi imfuneko yesigxina kunye nomzobo wesibonelelo esiphezulu. Siyakwenza oko kwicandelo elilandelayo.
Ukufunwa ngokubanzi kunye nombuzo wokuSebenziselwa koMsebenzi wokuThengisa - Ukumisa
Ukufunwa kwamanani kunye nokubonelela 1.
Esi sikhokelo silingana nesakhelo senkxaso kunye nesidingo , kodwa ngeenguqu ezilandelayo:
Ikhefu lokufuna i-downward liya kuba li-curve ye-curve yemfuno
I-curve supply supply ye-sloping iya kuba ngongoma wokunikezela
Esikhundleni se "intengo" kwi-Y-axis, sinalo "inqanaba lamanani".
Esikhundleni sokuba "ubuninzi" kwi-X-axis, sine "GDP yangempela", umlinganiselo wobukhulu boqoqosho.
Siza kusebenzisa umzobo ongezantsi njengesiko esisezantsi kwaye sibonise ukuba iziganeko zoqoqosho zichaphazela njani izinga lemali kunye ne-GDP yangempela.
Umlinganiselo woLuntu kunye noMbuzo wokuSebenza ngokuBambisana ngokuPhezulu - Icandelo 1
Uluhlu lweMfuno kunye noNcediso 2.
Abathengi balindela ukunikezelwa kwakhona
Ukuba umboleki ulindele ukuhlawulelwa kwemali ngoko abayi kuchitha imali eninzi namhlanje ukuba "basindise ngemini yokuvula". Ngaloo ndlela ukuba imali iyancipha, ngoko kufuneka ixabiso lethu lihlawule. Ukunciphisa ixabiso lokuncipha kuboniswa njengokutshintshela ngakwesobunxele kwindandatho yesigxina, njengoko kuboniswe ngezantsi. Qaphela ukuba oku kubangele ukuba i-GDP yangempela iyancipha kunye nenqanaba lentengo. Ngaloo ndlela ulindelo lokusasazeka kwexesha elizayo luza kusebenza ekunciphiseni ukukhula koqoqosho kwaye lulolu hlobo lwendalo.
Umxhelo woLuntu kunye noMbuzo wokuSebenza ngokuBambisana kunye neNgxenye - Icandelo 2
Ukufunwa kwamanyathelo kunye nokubonelela 3.
Ukuba ingeniso yangaphandle yenyuka, ngoko siyakulindela ukuba abantu basemzini babeza kuchitha imali emibini - kokubili kwilizwe labo nasekhaya lethu. Ngaloo ndlela sifanele sibone ukunyuka kwenkcitho yangaphandle kunye nokuthumela ngaphandle, okuphakamisa i-curve ye-curve. Oku kuboniswa kumzobo wethu njengokutshintshwa kwesokudla. Olu tshintsho kwinqanaba lokufuna i-curve lenza ukuba i-GDP yangempela ikhuphuke kunye nenqanaba lentengo.
Umxhelo woLuntu kunye noMbuzo wokuSebenza ngokuBambisana ngeNgxowa - Ingxenye 3
Amanani eNqanaba langaphandle
Ukuba amaxabiso angaphandle angaphantsi, iimpahla zangaphandle zithengwa. Sifanele silindele ukuba abathengi kwilizwe lethu ngoku banokungathenga iimpahla zangaphandle kunye nokuba banamathuba okuthenga iimveliso ezenziwe ekhaya. Ngaloo ndlela i-curve demand demand curve kufuneka iwele, eboniswa njengokutshintshela ngakwesobunxele. Qaphela ukuba ukuwa kwamanqanaba angaphandle kwamanye amazwe kubangela ukuwa kwamanqanaba entengo yasekhaya (njengoko kuboniswe) kunye nokuwa kwi-GDP yangempela, ngokuya kwesi sikhokelo seCenesi.
Umxhelo woLuntu kunye noMbuzo wokuSebenza ngokuBambisana kunye neSahlulo 4
Le yilapho isiqalo seNknesiya sihluke kakhulu kwabanye. Ngaphantsi kwesi sikhokelo, ukwanda kwenkcitho karhulumente kukunyuka kwindleko ebanzi, njengoko urhulumente ngoku ufuna izinto ezininzi kunye neenkonzo. Ngoko ke kufuneka sibone ukunyuka kwe-GDP yangempela kunye nexabiso lentengo.
Ngokuqhelekileyo konke okulindelekileyo kwimpendulo yekholeji ye-1. Kukho imiba emikhulu apha, nangona kunjalo, ufana njani na urhulumente ohlawula ezi nkcitho (intela ephezulu? Zomibini ezo ziyimicimbi engaphelelanga nombuzo onjengale.
Imfuno yoLuntu kunye noMbuzo wokuSebenza wokuThengiswa kweNgcaciso - Icandelo 5
Ukufunwa kwamanani kunye nokubonelela 4.
Abasebenzi balindela iMiphumo ephezulu yexesha elizayo kwaye baxoxisana noMvuzo ophezulu
Ukuba iindleko zokuqeshelwa abasebenzi ziye zenyuka, ke iinkampani aziyi kufuna ukuqesha abasebenzi abaninzi. Ngaloo ndlela sifanele silindele ukubona uwonkewonke wokunciphisa, oboniswa njengokutshintshela ngakwesobunxele. Xa ukubonelela kubanzi kuncinci, sibona ukuncitshiswa kwe-GDP yangempela kunye nokwanda kwinqanaba lentengo. Qaphela ukuba ukulindela kwexabiso lokunyuka kwamaxabiso elizayo kuye kwabangela ukuba izinga lamanani likhule namhlanje. Ngaloo ndlela abathengi balindele ukunyuka kwemali ngomso, baya kugqiba ukuwubona namhlanje.
Umlinganiselo woLuntu kunye noMbuzo wokuSebenza ngokuBambisana ngokuSebenza-Icandelo 6
Ukufunwa kwamanani kunye nokubonelela 5.
Ukuphuculwa kwezobuchwephesha Ukwandisa iMveliso
Ukunyuka kokuveliswa okuqinileyo kuboniswa njengokutshintshwa kwendonga yokunikezela ngokubanzi. Akumangalisi ukuba oku kubangela ukunyuka kwe-GDP yangempela. Qaphela ukuba kwakhona kubangela ukuwa kwinqanaba lentengo.
Ngoku kufuneka ube nokukwazi ukuphendula ukubonelela ngokubanzi kunye nemibandela yokufuna idibanisa kwiimvavanyo okanye uvavanyo. Umnqweno omhle
I-Basics Supply and Demand
Imizekelo yoNcedo kwi-Economics
5 Izigqibo zeMfuno
Umgaqo-nkqubo weMali oNgezelelweyo kunye neNkxaso yoLuntu
Ukugqithisa amaBhunga angamaKrestu amaninzi ukudubula abantu abaqhelekileyo
Ingelosi enkulu uMichael Ukulinganisa Imiphefumlo
FAKE I-Alber Alert "72B 381" isasazeka kude kunye (kunye nokukhawuleza) nge-Social Media
I-Archaeology yasePeru kunye ne-Central Andes
Imfazwe Yehlabathi I: Iimkhankaso zokuvula
Smith College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Imfazwe YaseMelika: Iimpapu zokuqala